कथा – दिप्ती | PaniPhoto
कथा – दिप्ती
भर्खरै कक्षा बारको परीक्षा सकिएको थियो। म फुर्सदिलो भएको थिएं। तर मेरा बुबालाइ म बरालिएर हिडेको मन परेन अनि मलाइ बुबाको कपडा पसलमा बस्ने आदेस भयो उहाँबाट।
मलाइ पसलको जिम्मा दिएपछि बुबा आफू भने बजारका अरु पसले हरु संग गफ गर्न जानु हुन्थ्यो दिनभर जसो।
पसल रुगेंर बसि राखेको थिएं, ग्राहकहरु खासै आएका थिएनन त्यो दिन।
दिनको बार बजे तिर पसलको अगाडि एउटा स्कुटर रोकियो। स्कुटरको स्टेन्ड लगाएपछि टाउकोको हेलमेट खुल्यो।
लामो स्ट्रेट गरेको कपाल हावाले थोरै छरियो। एउटा हातले कपाललाई सम्हाल्दै उनले कान पछाडी लगेर अड्याइन् अनि पसल पटि फर्किन्।
आहा..! क्या सुन्दर अनुहार। यति सुन्दर अनुहार त दमक बजारमा होलान् भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिइन।
अरुका नजरमा उनको भन्दा सुन्दर अनुहार थिए होलान् तर मेरो नजरमा भने उनको अनुहार नै मैले देखे जतिमा सबै भन्दा सुन्दर थियो। मेरा नजरहरु उनी बाट हट्न मानेनन्।
म पसलमा नै बसेर उनलाइ एकहोरो हेरि रहें।
उनी सरासर मेरो पसल भित्र पसिन अनि बोलिन् “एउटा टिसर्ट हेर्नू थियो।”
उनको बोली सुनेपछि म झसङ्ग भए अनि नजर तल झुकाउदै भने “कस्तो टिसर्ट?”
उनले कोहिलोको जस्तो मीठो स्वरमा भनिन् “हजुर संग कस्ता कस्ता छन देखाउनु न।”
मलाइ अरु बेला धेरै कपडा एकै पटक निकालेर छर्न झिंझो लाग्थ्यो। भरे पट्याउनको दिक्दारि सम्झेर म पहिले नै कस्तो चाहिने हो बुझेर मात्र निकाल्थे केही पिस मात्र। तर त्यो पटक मलाइ त्यस्तो भएन। मैले भए भरका सबै डिजाइनका टीसर्ट निकालेर उनको अगाडि राख्दिन थालें। उनले नै भनिन् “भयो… मैले खोजे जस्तो यहि हो।”
म मुस्कुराउदै उनको नजिकै आए। उनले एउटा टीसर्ट उठाइन् अनि आफ्नो सरिरको बाहिर टांसेर नाप लिन थालिन्। मैले हडबडाउदै बोलें “भित्र गएर लगाएर हेर्नुस न।”
उनले म पटि फर्केर थोरै मुस्कुराइन अनि बोलिन् “पर्दैन लगाउन, यो साइजको ठिक हुन्छ।”
उनको बोली अनि त्यो मुस्कानमा के जादु थियो कोनि म त्यसै लठ्ठै भएको थिएं। मलाइ उनी दिन भर पसलमा नै बसे हुन्थ्यो नि जस्तो लागेको थियो। म फेरि एकहोरो उनले कपडा सुमसुम्याइ रहेको हेरि रहेको थिएं। उनले बोलिन् “कति हो यसको?”
मलाइ त त्यो टिसर्ट उनलाइ सित्तैमा दिन मन थियो तर बुबाको लात्तीको पनि डर थियो अनि सायद मैले सित्तैमा दिएर उनले लाने पनि त थिइनन्। मैले सानो स्वरमा बोलें “७५० हो।”
मैले मात्र २० रुपयां नाफा राखेर बोलेको थिएं। सायद उनले सोचे भन्दा धेरै सस्तो पाएर होला उनको अनुहारमा अझै बढी चमक छाएको थियो। उनले केही नबोली आफ्नो पर्सबाट ७५० रुपैया निकालेर मेरो हातमा राखी दिइन्।
उनले पैसा मलाइ दिदै गर्दा उनको हातले मेरो औलामा स्पर्श गरेको थियो। थाहा छैन त्यो स्पर्समा के थियो, मेरो मुटु सम्म एउटा अनौठो तरंग पुग्यो। हुन त पसलमा अरु धेरैका हात संग स्पर्श हुने गर्थे तर त्यस्तो कहिले महसुस भएको थिएन जुन उनलाइ छुंदा भएको थियो। उनले मलाई पैसा दिई सकेपछि एकपटक मलाइ हेरिन् अनि बिदा मागेको भावमा थोरै मुस्कुराइन। र, बाहिर निस्किएर स्कुटरमा बसिन् अनि ह्यान्डलमा झुन्ड्याइको हेलमेट लगाइन्।
उनले स्कुटर स्टार्ट गर्न खोजिन तर स्कुटर बाट अलिकती च्यां च्यां आवाज मात्र आयो, स्टार्ट भएन। उनले निकै बेर सम्म कोसिस गर्दा पनि नभए पछि अँध्यारो अनुहार लगाउदै स्कुटर बाहिर निस्किन अनि म तिर फर्केर हेरिन। म पसलबाट निस्केर उनको नजिकै गएं अनि सोधें “के भयो र?”
उनले माया लाग्दो स्वरमा भनिन “हेर्नू न! स्टार्ट नै हुंदैन! अगि सम्म ठिकै थियो।”
मैले उनको स्कुटरको ह्यान्डल पकडेर स्टार्ट गर्न खोजें तर भएन। पछाडिको स्टेन्ड लगाएर किक मारेर पनि हेरें, त्यसो गर्दा पनि भएन। उनले झन झन अँध्यारो अनुहार लगाएर म पटि हेरि राखेकी थिइन्।
म उनलाइ खुशी बनाउन चाह्न्थे। तर मलाइ पनि स्कुटरको बारेमा धेरै थाहा थिएन। मैले सोधें “पेट्रोल त छ?”
उनले झनै कालो अनि डराएको अनुहार बनाएर मेरो अनुहारमा हेरिन् तर केही बोलिनन्।
मैले उनको अनुहारमा निरासा देखेर उनलाइ सम्झाउदै भने “त्यहां लगेपछी केहिबेर मा नै बनी हाल्छ! धेरै बिग्रेको हैन होला।”
उनले थोरै आसावादी भएर मलाइ हेरिन अनि स्कुटरको ह्यान्डल पकडेर अगाडि ठेल्न खोजिन्।
उनलाइ त्यो स्कुटर ठेल्न हम्मे हम्मे भै रहेको देखेर मैले बोलें “खै ल्याउनुस म पुर्याइ दिन्छु।”
उनले थोरै रुन्चे हांसो हांस्दै भनिन् “हैन… आफै लगि हाल्छु नि।”
उनले चुपचाप मलाइ स्कुटर छोडी दिइन। मैले स्कुटरको ह्यान्डल पकडेर मेरो छेउको पसलेलाई कराएं ” ए शंकर दाइ! मेरो पसल तिर नजर लगाउदै गर्नुस है?”
उसले मलाइ अर्काको स्कुटर डोर्याउदै गरेको देखेर होला अनौठो हांसो हांस्दै बोल्यो “ल ल!”
यसरी सुरु भएका कुरा निकै बेर सम्म लम्बिए। मैले उनको बारेमा निकै थाहा पाई सकेको थिएं। उनी पहिले काठमान्डू बसेर पढ्दी रैछिन फुपुकोमा। प्लस टु सके पछि उनलाइ उता बस्न मन नलागेर सुरुङ्गा नै फर्केकी रैछिन। उनको पिताको किराना पसल रहेछ सुरुङ्गा बजारमा। उनको एउटा भाइ पनि रहेछ एघारमा पढ्ने। मैले पनि उनलाइ केही कुरा सुनाइ सकेको थिए। मैले पनि भरखर प्लस टु सकेको, घर अलिक पर गाउंमा रहेको अनि पसलमा बुबालाई सघाउन बसेको आदि इत्यादी। उनले पनि मेरा कुरा ध्यान दिएर सुन्दैथिन। लाग्थ्यो “उनी पनि मेरो बारेमा धेरै जान्न चाहन्छिन्।
त्यति नै बेला बुबाले चिया पसलको बाहिर पटि बाट पसल तिर फर्किदै गर्दा मलाइ देख्नु भयो। एक पटक आँखा तरेर रिसाए झैं मलाइ हेर्दै सरासर पसल तिर बढ्नु भयो केही नबोली। मलाइ भने अफ्ठेरो महसुस भयो, केटि संग बसेको बेला बुबाले देखेकोले।
बुबा पसल तिर गएकाले मलाइ झनै ढुक्क भएको थियो। अनि फेरि उनी संग केही बेर कुराकानी चली रह्यो। म संग कुरा गर्दा गर्दै उनले आफ्नो स्कुटर बिग्रीएको पीडा पनि भुली सकेकि जस्ती देखिन्थिन। मलाइ त झन याद हुने कुरै भएन।
केही बेर पछि उनले घडी हेर्दै बोलिन “अब त बन्यो होला, जाउं ।”
मैले आफ्नो पर्स झिके पछि उनी रोकिइन्। पर्सबाट पैसा झिकेर साहुलाइ दिदै गर्दा याद आयो “उनलाइ बेचेको टिसर्टको नाफा पनि बरबार भयो।”
म थोरै हांसी दिएं। उनी पनि मलाइ हेरेर अलिकती हांसे जस्तो गरिन्।
स्कुटर बनाउने पसलमा पुग्दा भर्खरै उनको स्कुटर तयार भएको रहेछ। पसलको दाइले उनका हातमा एउटा बिल थमायो।
बिल हातमा परेपछि उनको अनुहार फेरि अध्यारो भयो। मैले नजिकै गएर बिल तिर हेरे। दुई हजार लाग्ने भएछ। निकै सामान फेर्नु परेछ। मैले उनको
अनुहार त्यस्तो देखे पछि सोधी हालें “के भयो र?”
उनले माया लाग्दो नजरले मलाइ हेरिन अनि फेरि नजर झुकाएर सानो स्वरमा बोलिन “म संग अहिले यत्रो पैसा छैन! बार सय मात्र होला जम्मा।”
उनको कुरा सुनेर म केहीबेर चुप भएं। केही बेर पछि फेरि बोले “खै त्यति दिनुस त…..अरु म थपेर दि राख्छु।”
उनले उस्तै आंखाले मेरो अनुहारमा हेरिन अनि केही नबोली अफ्ठ्यारो मान्दै बारसय रुपयां निकालेर मेरो हातमा राखी दिइन। मैले आफ्नो पर्स खोलेर हेरें। पर्समा नौ सय रुपयां थियो। मैले आठ सय थपेर पसलको दाइको हातमा राखी दिएं।
उनी लजाए झै अध्यारी भएकी थिइन। मैले उनको अनुहारमा हेर्दै हांसी दिएं। उनले मधुरो स्वरमा बोलिन् “भोलि दस बजे आएर दिन्छु है हजुरलाइ।”
मैले हुन्छ भनेर टाउको हल्लाएं।
उनी स्कुटरमा बसिन अनि म पटि फर्किएर अफ्ठ्यारो मान्दै भनिन “हजुरको फोन नम्बर दिनुस न ……।” उनले मेरो नम्बर मागेपछि नदिने कुरै भएन। मैले नम्बर भने, उनले आफ्नो मोबाइलमा टिपिन्। अनि “जान्छु है” भन्दै मुस्कुराउदै अगाडि बढिन्। उनी गएको पर सम्म हेरि रहें। झट्ट दिमागमा आयो “थुक्क… उसको नम्बर चाहि माग्न नै बिर्सेछु।”
बुबा केही बोल्नु भएन। बेलुका पसल बन्द गरेर घर गयौं। खाना खाए पछि म आफ्नो कोठामा पसें अनि ओछ्यानमा पल्टेर उनलाइ सम्झन थालें। कता कता दिमागमा यस्तो कुरा पनि आयो “भोलि उनी आइनन् भने त मेरो त्यत्रो पैसा गयो खोलै खोला ।”
तर मेरो मनले उनलाइ बिस्वास गरेको थियो। सायद माया नै गर्न थालेको थियो। म आँखा बन्द गरेर अनेक कल्पना गर्न थालें। “मैले उनलाइ प्रेम प्रस्ताव राखेको, उनले स्विकार गरेको, उनको स्कुटरमा बसेर हामी घुम्न गएको, उनको हात पकडेको, चुम्बन गरेको, हाम्रो बिहे भएको, हाम्रो छोरा छोरी भएको। यसरी कल्पनामा हराएर फेरि यथार्थको संसारमा फर्कदा मलाइ लाज लागेर आयो अनि मुस्कुराउदै सिरानी पकडेर अर्को पटि कोल्टे फेरेर सुति दिएं…..।”
भोलिपल्ट बिहानको दस बज्नु भन्दा पहिले, मैले सय पटक घडि हेरेको थिएं होला। अरु दिन भन्दा त्यो दिन घडिका कांटा ढिलो कुदेको झैं लाग्दै थियो मलाइ। बिहान घर बाट आउंदा नै म अरु दिन भन्दा चिटिक्क परेर निस्केको थिएं त्यो दिन। पसलमा आएर पनि बेलाबेला ऐना हेर्दै आफ्नो केश मिलाउदै गर्थें म। अरु दिन जस्तै त्यो दिन पनि दस नबजी बुबा बजार डुल्न निस्किनु भएको थियो। म भने घरीघरी बाटो तिर हेर्दै उनलाइ पर्खदै थिएं। दस बजेको मात्रै के थियो उनी मेरो पसल अगाडि आइ पुगिन्।
उनी पनि अघिल्लो दिन भन्दा झनै राम्री भएकि थिइन्। टिमिक्क सरिरमा मिलेका कुर्ता सलवार ले उनलाइ परि झैं देखिएको थियो। उडेको कपाललाइ मिलाउदै उनी मुस्कुराउदा त मेरो मुटुमा ढ्यांग्रो बजे झै भएको थियो। उनी मीठो मुस्कान छर्दै मेरो पसल भित्र पसिन्। म पनि मुस्कुराउदै छेउको कुर्सी तानेर उनलाइ बस्न आग्रह गरें। म उनि संग हजार कुरा गर्न चाहान्थे तर म संग बोलिको सुरुवात गर्ने सम्म शब्द थिएनन्। केही बेरपछि उनले आफैं बोलिन् “हिजो त हजुरलाइ थ्यांक यु सम्म नभनी हिडेछु…. के सोच्नु भयो होला हजुरले?”
उनको कुरा सुनेर म अक्मकाउदै बोले “के सोच्नु र? हिजो तपाईं टेन्सनमा हुनुहुन्थ्यो नि त।”
उनी मलाइ हेरेर अलिकती मुस्कुराइन् मात्र बोलिनन् केही।
केहीबेर पछी उनले आफ्नो पर्स खोलेर हजारको नोट मलाइ दिदै भनिन “यो राख्नुस्, हजुरको पैसा।”
मैले चुपाचाप पैसा पकडे अनि २०० रुपैया गल्ला बाट निकालेर उनलाई दिएं। उनले पैसा पकडेर पर्समा राखिन्।
फेरि केही बेर सुन्यता छायो। उनी कुर्सिमा बसेर पसलको चारै तिर नियाल्न थालिन्। म भने भित्रैबाट उनलाइ हेरिरहें उनले थाहा नपाउने गरि।
उनीसंग बोल्नका लागि केही कुरा नै नभएर मन खल्लो भएको थियो। त्यति नै बेला मनमा के आयो कोनि प्याच्च बोली हालें “तपाइंको बोइ फ्रेन्ड छ कि छैन ?”
उनले चकित हुँदै मलाइ हेरिन्। त्यस्तो कुरा मुख बाट खुस्केकोमा मलाइ लज्जा बोध भयो। मैले नजर झुकाएं। उनको पनि अनुहार थोरै अँध्यारो भयो। मलाइ डर लाग्यो। मैले सानो स्वरमा भने ” सरि!”
उनले मलाइ हेर्दै थोरै हांसे झै गरिन अनि फेरि नजर झुकाएर बोलिन् “छैन मेरो त कोहि! हजुरको?”
उनी मलाइ हेरेर हांस्दै बोलिन् “झुट बोल्नु भयो! यति राम्रो त हुनुहुन्छ।”
मैले बोल्ने बित्तिकै उनले बोली हालिन् “मलाइ त राम्रो लाग्छ त!”
यति बोली सक्दा उनको अनुहार रातो भयो। सायद उनले नचांहादा नचाहादै फुस्किएको थियो त्यो कुरा उनको मुखबाट। मलाइ नि थोरै अफ्ठ्यारो महसुस हुँदै थ्यो तर पनि हांस्दै भने “तपाईं त झन यति राम्री हुनु हुन्छ काठमान्डुमा कति केटा लठ्ठै हुन्थे होला।”
उनले मुस्कुराउदै बोलिन “म भन्दा राम्रा कति छन् छन् नि।”
उनको अनुहार रातो भयो, सायद लाजले होला। मलाइ पनि केही अफ्ठ्यारो महसुस भयो। निकै बेर सम्म म केही बोलिन।
उनले फेरि बोलिन् “हजुर मलाइ तिमी भनेर बोलाउनु न, तपाईं भन्दा अफ्ठेरो लाग्छ के…..।”
मैले हांस्दै भने “तपाईं पनि मलाइ तिमी भन्नू न त।”
उनि लजाए झैं मुस्कुराउदै बोलिन् “नाइ के! हजुर चाहिँ तिमी भन्नू म चाहिँ तपाईं नै भन्छु, म उमेरले पनि अलिकती सानी होला सायद।”
उनले हांस्दै भनिन “उमेर सोध्न हुंदैन त छोरि मान्छेको, हजुरको भन्नू न बरु।”
मैले हांस्दै भनी दिएँ “म ४७ सालको!”
उनले उत्साहित हुँदै बोलिन् “म भन्दा त ठूलो हुनुहुंदो रैछ! अब तिमी भन्नू पर्छ मलाइ।”
मैले हांस्दै बोलें “हवस हजुर तिमी नै भनौला।”
उनले घडी हेर्दै बोलिन् “अब त म जान पर्छ, पुग्न पनि निकै समय लाग्छ।”
उनले हातमा रहेको पर्स खोलिन् अनि एउटा पट्याएको कागज निकालिन्। उनले त्यो कागज म तिर बढाउदै लजालु स्वरमा बोलिन् “म गए पछि मात्र हेर्नू।”
मलाइ लाज लाग्यो। मैले केही बोल्न नै सकिन। त्यो समयमा खासै कसैले प्रेम पत्र लेख्दैन थिए, सबै कुरा फोनमा नै हुन थालेको थियो।
उनले के दिईन मलाइ यसमा? म अचम्मीत भएको थिएं।
मैले केही नबोली कागजको टुक्रा समाए। उनि म पटि पनि नहेरी सरासर स्कुटर तिर लागिन्। स्कुटर स्टार्ट गरेर उनी त्यहां बाट निस्केपछि मैले पट्याएको कागज खोलें। त्यहां निकै सुन्दर अक्षरमा लेखिएको थियो “हजुर अनुहारको मात्र हैन मनको पनि सुन्दर हुनुहुन्छ।”
उनको ती सब्दले मेरो मन फुरुक्क भएको थियो। म आकासमा उडेझैं महसुस गर्दै थिएं। मैले गोजिबाट मोबाइल निकालें अनि म्यासेज लेखे “थ्यांक यु सो मच! तिमी झन सुन्दर छौ अनि तिम्रो मन पनि।”
मैले म्यासेज पठाएको केही घन्टा पछि उताबाट म्यासेज आयो “तपाईका सुन्दर नजरले सबथोक सुन्दर देख्छन।”
मलाइ त्यो म्यासेजको केही रिप्ले लेख्न आएन। दिन बित्यो अनि रात आयो। बेलुका ओछयानमा पल्टेर अघिल्लो दिन जस्तै बिबिध कल्पना गर्न थालें म।
फेरि उनलाई म्यासेज गर्न मन लाग्यो। मैले धेरै सोचें तर केही लेख्न आएन। अनि मात्र “गुड नाइट राम्री मान्छे” लेखेर सेन्ड गरि दिएं। सेन्ड भए पछि लाज पनि लाग्दै थियो तर केही बेरमा नै उताबाट म्यासेज आयो। लेखेको थियो “गुड नाइट झन् धेरै राम्रो मान्छे! हाहा।”
यसरि अब हामि बिच लगातार म्यासेज आदन प्रदान हुन थाले। हरेक बिहान म उठ्दा उनले “गुड मर्निङ राम्रो मान्छे” लेखेको म्यासेज हुन्थ्यो। म पनि उठेर उनलाइ म्यासेज पठाउथे। रातमा सधैं गुड नाइट म्यासेज हुन्थ्यो। दिनमा पनि बेला बेला म्यासेज आउथे। कहिले हिन्दी सायारी त कहिले हालखबर लेखेका म्यासेजले मोबाइलको घन्टी ठ्याङ ठ्याङ बजि राख्थ्यो। म्यासेज हुँदै हामी बिस्तारै फोन पनि गर्न थाल्यौं। फेसबुक पनि भर्खरै सुरु भएको थियो तर फेसबुकबाट भने हामी खासै कुरा गर्दैन थ्यौ।
पहिलो भेटको पन्ध्र दिन नबित्तै हामी एकदमै घनिष्ठ भएका थियौं। हामिलाइ एक अर्का संग बोल्न लाज लाग्न छोडेको थियो अब। हामी फोनमा घन्टौं कुरा गर्थ्यौं। दिनमा कम्तिमा दस म्यासेज आदनप्रदान हुन्थे। म उनलाइ माया गर्थे। मलाइ लाग्थ्यो उनी पनि मलाइ माया गर्छिन् भनेर। तर कसैले भनेको थिएन “माया गर्छु” भनेर।
उनले हतारिदै भनिन् “के कुरा हो? भन्नू न।”
मैले अक्मकाउदै बोलें “रिसायौ भने?”
उनले सानो स्वरमा भनिन् “रिसाउदिन भन्नु न।”
केहिबेर सम्म उनको आवाज आएन। मेरो मुटु झनै जोडले काप्न थाल्यो। उनले अस्विकार गर्ने हुन् कि भन्ने डरले मेरा कान राता अनि ताता भएका थिए।
केही बेरपछि उनको मधुरो आवाज आयो “लभ यु टु।”
उनले मेरो प्रस्ताव स्विकार गर्दा मलाइ एउटा युद्ध जितेको झैं महसुस भएको थियो। मुटुको गति अझै धेरै बढेको थियो। मलाइ अब के बोल्ने भन्ने कुराको पत्तो थिएन।
मैले हड्बडाउदै बोली हालें “थ्यांक यु…।”
उताबाट केही आवाज आएन। आफैले बोलेका सब्दले मलाई लाज लागेर आयो। त्यहां देखि बढी बोल्ने अरु कुनै शब्द नै पाइन मैले। अनि मधुरो स्वरमा भने
“एकछिन पछि फोन गर्छु है?”
उनले केहिबेर पछी सानो स्वरमा बोलिन् “कहाँ..?”
मैले झट्टै भनी हालें “दमक आउन।”
उनले थोरै हांस्दै भनिन “पसलमा भेट्ने?”
मैले नि हांस्दै भने “पसलमा हैन! फ्लिम हेर्न जानू पर्छ।”
उनले झनै हांस्दै सोधिन “कुन फ्लिम?”
मैले भने “जुन चलेको छ त्यही हेरौंलानि, के फरक पर्छ र?”
मेरो कुरा सुनेर उनले मीठो हांसो हांसी दिइन्। मैले पनि हांस्दै भने “कि नआउने?”
उनले जिस्किए झैं गर्दै भनिन् “अब जे भने नि मान्नु परि हाल्यो नि!”
उनले हांस्दै बोलिन् “ठिक्क समयमा आइ पुग्या छु त अनि।”
मैले केही गुनासो गरे झैं बोलें “म आएको दुई घण्टा भै सक्यो।”
उनले मलाइ जिस्काउदै भनिन् “उठ्ने बित्तिकै कुदि हाल्नु भयो के हो ?”
मलाइ भन्न मन थियो कि “तिमिलाइ भेट्न कति धेरै हतार भएको थियो” भनेर, तर भन्न सकिन।
मैले घडी हेर्दै बोलें “बेला भयो, जाउँ भित्र।”
हल भित्र पसेर कुनाका सिटमा बसे लगत्तै हलका बत्तिहरु निभे। हलमा त अन्धकार छाएको थियो तर मेरो मन भने झनै उज्यालो भएको थियो। फिल्म सुरु भइ सकेको थियो तर मेरो ध्यान फिल्ममा थिएन। सायद उनको पनि थिएन होला। फिल्म चल्दै गर्दा फैलिएको उज्यालोमा टल्कने उनको अनुहारबाट मेरा नजर हटेका थिएनन। उनी पनि घरी घरी म पटि फर्केर हेर्थिन् अनि नजर जुधे पछि फेरि फिल्ममा नै ध्यान दिएझैं गर्थिन्।
मलाइ उनी संग धेरै नजिक हुनु थियो। सामन्य कुराहरु भन्दा अघि बढेर उनी संग धेरै सामिप्यता बढाउनु थियो। तर म अलमल्लमा परेको थिएं अब उनी संग कस्ता कुरा गरौं भनेर। फिल्मको चर्को आवाजले खासै गफ गर्ने बाताबरण पनि थिएन। अचानक मेरो हातमाथी उनले आफ्नो हात राखी दिइन्। उनको त्यो कोमल हातको स्पर्सले मेरो मुटु तरंगित भएको थियो। केहीबेर सम्म त म अलमल्ल नै परेको थिएं। उनले मेरा हातमाथी आफ्नो हात छोडि दिएर पनि नथापाए झै फिल्मको पर्दा तिर नै हेरि रहेकी थिइन्। मैले पनि पर्दा तिर नै नजर लगाउंदै बिस्तारै उनका हातहरु चलाइ राखें। उनले केही महसुस नै नभए झैं त्यो हातलाइ त्यहिं छोडी रहिन्।
मैले बिस्तारै मेरा औंलाहरुलाइ उनका औंलाका बिच तिर पसाएं अनि मुठ्ठी कसेर उनको हात पकडें। उनले पनि आफ्ना भिंजिएका औंला हरु बन्द गरिन्। हामी दुबैका हातहरु एकै ठाउंमा कसिए। हाम्रा हातहरु एक आपसमा कसिंदा मलाइ हाम्रा मुटु नै एक आपसमा जोडिएको झैं महसुस भएको थियो।
त्यो कोमल हातलाइ जीवन भरको लागि पकडी राख्ने रहर जागेको थियो। हाम्रा हातहरु झन धेरै कसिंदै थिएं अनि मुटुको गति अझै धेरै बढ्दै थियो। त्यतिनै बेला उनले आफ्नो टाउको मेरो कुममा ढल्काइ दिइन्। उनको केसको त्यो बासनाले मेरो मनमा अनौठो जादु गरे झैं भयो।
म त्यसै लठ्ठीएको थिए। म उनलाइ आफ्नो छातिमा तानेर टांस्न चाहान्थे तर सकिन। उनले मेरो कुममा सिर राखेर आँखा बन्द गरेकी थिइन अनि मेरो हातलाइ झनै जोडले कसेकी थिइन्। मैले थोरै टाउको घुमाएर उनको निधारमा मेरा ओठहरु पुर्याएं। मेरा ओठले उनको निधारमा स्पर्श गर्दा पनि उनले कुनै प्रतिकार नगरे पछि मैले हिम्म्मत गरेर उनका ओठहरुमा चुम्न खोजें। ओठमा ओठले छुन पनि नपाइ उनले मेरो कुमबाट टाउको उठाइन्। मलाइ आफुले गल्ती गरेको महसुस भयो। उनी रिसाइन् होला भनेर भनेर मन खल्लो भयो। मैले पनि मेरा नजर सिधा गरेर पर्दा तिर हेर्न थालें। हाम्रा कसिएका हात भने अझै छुटेका थिएनन्। हामी दुबैका नजर फिल्मको पर्दामा थिए तर ध्यान भने थिएन। निकैबेर सम्म मौन रहेपछी अचानक मैले उनको हातबाट मेरो हात छुटाएं। उनले अनौठो तरिकाले म पटि फर्केर हेरिन्। त्यति नै बेला मैले उनको शिरमा पकडेर आफुतिर तानी ओठहरुमा चुम्बन गरि दिए। यो पटक उनले कुनै प्रतिकार गरिनन्। आँखा बन्द गरेर आफुलाइ मेरो जिम्मामा छोडी दिइन्!
यसरी सुरु भएको हाम्रो सम्बन्ध समय संगै झन धेरै गाढा हुँदै गयो। मौका मिल्ने बित्तिकै हामि एक अर्कालाइ भेट्न कुदि हाल्थ्यौं। कहिले उनी दमक आउथिन त कहिले म सुरुंगा पुग्थे। कहिले हामी दोमुखा पुग्थ्यौं भने कहिले कन्यामको मन्दिरमा गएर कहिले नछुट्ने कसम खाएर फर्कन्थ्यौं। उनी भन्ने गर्थिन
“म हजुर बिना बांच्न सक्दिन, मलाइ कहिले नछोड्नु है..?”
मैले उनलाइ आफू तिर तान्दै भने “आफ्नै पसलको नि चोर्न पर्छ त लाटी?”
उनी मुस्कुराउदै मेरो अंगालोमा टांसिइन्।
उनले मलाइ भाइको फोटो त देखाएकी थिइन् तर मैले खासै ध्यान नदिएको भएर ठम्याउन सकिनछु। मलाइ डर लाग्यो। अनुहार रातो भयो। मुटु जोडले काप्न थाल्यो। मैले सानो स्वरमा बोलें “अब गाह्रो पर्ने भयो तिमिलाइ।”
उनले मेरो अनुहारमा डर देखेर होला मलाइ सम्झाउदै भनिन “नडराउनु केही हुदैन! ड्याडिलाइ भन्दैन त्यसले…।”
भोलिपल्ट सबै कुरा सामन्य भइ सकेको थियो। उनी ड्याडिले थाहा नपाउने गरि मलाइ फोन गर्थिन्, अनि बेला बेलामा म्यासेज पनि। अघिल्लो दिनको कुरा हामी दुबैको मन बाट हटि सकेको थियो।
मैले मन नलागी नलागी मोबाइलमा नजर लगाएं। तस्बिर देख्ने बित्तिकै म माथी एउटा बज्र खस्यो। म त्यहिं रिंगटा लागेर ढल्छु कि जस्तो भयो। तस्बिरमा अरु कोहि नभएर मेरि दिप्ती थिइन। मेरो सास नै रोकिन्छ कि झैं हुँदै थियो। मुटु तेज संग दोडिएको झैं लाग्दै थियो। मलाइ के बोल्ने के गर्ने भनेर छटपटी हुन थाल्यो। मैले टेबलमा रहेको रक्सिको बोतल तानेर गिलासमा हालें अनि थोरै पानी मिसाएर एकै पटक पिइ दिएं। साथिहरु अचम्मीत भएर मलाइ हेर्न थाले।
मैले अर्को गिलास पनि पिइ दिएं। प्रकासले सोधी हाल्यो “के भयो तलाइं हं….?”
मैले यति बोलेपछी उनले सानो स्वरमा सोधिन् “के थाहा भयो ? के थाहा थिएन र हजुरलाइ?”
मैले पहिलो पटक उनलाइ तं भनेको थिएं । मेरो रुखो बोली सुनेर उनी रुन थालिन्। मैले अझै थपें “भयो नाटक नगर्…. गर्ने बेलामा गरि हालिस्।”
उनले फेरि रुंदै बोलिन्”हजुरलाइ मैले केही ढांटेको छैन… कस्ले के भन्यो हजुरलाइ?”
मैले उसै गरि रिसाउंदै बोलें “भयो सकियो अब…. तलाइ मैले चिनी सकें…. सुत्ने बेलामा सुति हालिस अब नाटक गर्छेस्।”
म केही बोलिन। उ पनि निकै बेर सम्म चुपचाप मलाई हेरि रह्यो। केही बेर पछि उसले बोल्यो “अब जान्छु यार म…. इटहरिमा अलिकती काम छ…
भोलि फर्कनु पर्ने।”
केही बेर पछि प्रकासले लामो सास फेरेर भन्यो “तं संग के झुट बोल्नु यार… काठमान्डौंमा हामी एउटै कलेजमा पढेको… म उसलाइ मन पराउथे तर उ
मलाइ मन पराउदिन थि…. यति नै हो कुरा।”
सुरुंगा बजार पुगेपछी बसबाट उत्रीएर म दिप्तिको घर नजिकैको पान पसल अगाडिको बेन्चमा गएर बसें। उनको घरमा सामन्य भन्दा बढी नै मान्छेहरुको भिड थियो। तर उनी भने कतै देखिएकी थिइनन्। म एकहोरो उनको घर तिर हेरेर उनैलाइ खोजी रहेको थिएं। घरको मुल ढोकाबाट उनको भाइ बाहिर निस्कियो। उसका र मेरा नजर जुधी हाले। उ रिसाएको अनुहार बनाएर म भए तिर आयो। म नचिने झै गर्दै यता उता नजर घुमाउदै त्यहिं बसिराखें। आइपुग्ने बित्तिकै उसले झर्कदै बोल्यो “ओए तं किन आको यहाँ हं ?”
म चुपचाप केही नबोली बसि राखें “उसले मेरो टाउकोमा हातले ठेल्दै बोल्यो “किन आको भन् मुजि….।”
उसले सन्किदै भन्यो “तंलाइ किन भेट्न पर्यो दिप्तिलाइ ? उसको बिहे छ पर्सि।”
उसले उस्तै रुखो स्वरमा जवाफ फर्कायो “तलाइ के जिस्किए झैं लाग्यो? यहा बाट गइ हाल नत्र खान्छस दह्रो।”
मलाइ उसको रुखो बोलिले कुनै फरक परेको थिएन। मलाइ त मात्र उनको बिहेको कुराले नमीठो झट्का लागेको थियो। आंखाबाट आँसु झरेका थिएनन् तर मन रोइ सकेको थियो। ओरिपरी सबै धमिलो देख्न थालेको थिएं। रिगंटा लाग्छ कि झैं भएको थियो। मैले जसो तसो आवाज निकालेर उसलाइ सोधें “के दिप्तिले नै बिहे गर्न मानेकी हुन्?”
उस्ले कड्किएर भन्यो “मानेर त बिहे गर्न लागेको त! धेरै कुरा नगरी तं यहा बाट खुरुक्क गै हाल नत्र….।”
भोलिपल्ट बिहानको छ बजे मेरा आँखा खुलेका थिए तर मलाइ उठ्ने मन थिएन। म ओछ्यानमा नै पल्टेर दिप्तिको बारेमा सोच्दै थिएं। अब भोलि पल्ट देखि त दिप्ती अरु कसैकी हुँदै थिइन्!
यस्तो सोच्दा मेरो मुटु तीखो कांडा गाडिए झैं चस्कन्थ्यो। त्यति नै बेला अर्को कोठामा ल्यान्डलाइन फोनको घन्टी बज्यो। आमाले आएर फोन उठाउनु भयो। फोन मेरो लागि आएको रहेछ। आमाले कराउंदै भन्नू भयो “ए सन्तोष…. प्रकाशले फोन गरेका छन् काठमान्डु बाट.. आएर बोल्।”
म मन नलागी नलागी भए पनि उठेर फोन भएको कोठामा पुगें अनि फोन पकडें। उसले उताबाट आत्तिएको स्वरमा बोल्यो “ओए एउटा कुरा थाहा पाइस?”
मैले सानो स्वरमा भने “के कुरा हो?”
उसले फेरि भन्यो “यत्रो हल्ला चलेको छ अझै थाहा पाको छैनस?”
मैले भने “अहं! के कुरा हो?”
उसले भावुक स्वरमा बोल्यो “दिप्ती थि नि? झुन्डिएर मरिछ यार! भोलि बिहे रैछ, आज नै मरिछ बिचरा!….. उसकी एउटि साथिले सुनाएकी भर्खरै!”
© 5307 PaniPhoto. All rights reserved.